Maalinta cudurka Dabaysha oo dunida laga xusayo xilli cudurkaasi Soomaaliya kusii fidayo - Halbeeg News
MUQDISHO (HALBEEG) – Dunida waxaa maanta laga xusayaa Maalinta Cirib Tirka Cudurka Dabaysha oo sannad kasta 24ka bisha Oktoobar adduunka laga xuso, xilli Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee (WHO) ay shaacisay in cudurkaasi xawli ugu sii fidayo gudaha dalka Soomaaliya.
WHO ayaa sheegtay in fiditaanka cudurka Dabaysha ay ka qayb qaateen arrimo badan oo is biirsaday kuwaasoo ay kamid yihiin: tallaalka oo aan si buuxda u wada gaarin ubadka Soomaaliyeed, ammaan darrada ka jirta gobollada Soomaaliya qaarkood iyo bulshada oo qaybo badan oo kamid ahi reer guuraa iyo barakaceyaal yihiin.
“Maanta, waxaan wajahaynaa caqabad ah in aanan heli karin waddooyin aan ku gaarno carruurta, taasoo ay ugu wacan tahay ammaan dari, barakac dadwayne oo ay colaaddu sababtay iyo masiibooyin dabiici ah, iyo sidoo kale nidaamka caafimaad oo ah mid liita, kuwaas oo dhammaantood qayb ka noqday in heerka tallaalka carruurta uu hooseeyo” Wakiilka WHO ee Soomaaliya Dr. Ghulam Popal ayaa sidaas yiri.
Isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu intaas raaciyey “Taasi waxay keentay soo-if-bixitaanka cudurka Dabaysha kaasoo ah mid aad u faafa, kuna fida nadaafad xumida. Laakiin qiyaas fudud oo taxane ah oo tallaalka dabaysha ah waxay badbaadin doonaan nolosha caruurta.
Dhinaca kale, Wakiilka Hay’adda UNICEF ee Soomaaliya Steven Lauwerier, ayaa isna sheegay in maalin kasta xarumaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanku ay qaabilaan carruur u baahan in la siiyo tallaalka cudurka dabaysha, balse deegaannada qaar ay yihiin kuwo aan xasilloonayn, sidaas darteed ay adag tahay in tallaalka la gaarsiiyo.
“Maalin kasta, shaqaalaha ku sugan goobaha ay adeegyada caafimaad ka socdaan ayaa aqoonsanaya carruur u baahan in la tallaalo, goobahaas oo ay inta badan degenaansho la’aan daran ka jirto.”ayuu yiri.
Olole tallaal oo baahsan oo bishan Oktoobar laga sameeyey gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobollada dhaca xuduudka Soomaaliya la wadaagto dalalka Kenya iyo Itoobiya, waxaa -sida WHO sheegtay- lagu tallaalay carruur ay tiradoodu gaareyso 2.6 milyan oo cunug.
Gobollada tallaalka laga fuliyey ayaa kal ah: Gedo, Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe, Bakool, Hiiraan, Galguduud, Mudug iyo Nugaal.
Ololaha xiga ayaa bilaaban doona 29ka bishan Oktoobar, isagoo socon doonaa ilaa kowda bisha Nofeembar ee sannadkan 2018.
Sarkaal ka tirsanaa madaxda Al shabaab oo Bakool lagu dilay
TRUMP "Waa Bin Salmaan, haddiiba ay jirto cid ka dambaysey dilka Khaashuqji"